Android Pie wuxuu bilaabmaa inuu yimaado Asus ZenFone 5Z | Androidsis
Eder Ferreño | | Mobiles, Noocyada Android
Maalmo ka hor waa la kashifay in ZenFone 5 uu ahaa taleefankii ugu horreeyay ee buugga buugga ee Asus si loo helo Android Pie. War dad badan ka yaabiyay, tan iyo markii shirkad iska leh ayaa ku dhawaaqday in ZenFone 5Z ay noqon doonto tii ugu horreysay helitaanka helitaanka cusboonaysiintaas. Waxaa markaa loo qaatay in aysan ahaan doonin illaa Janaayo marka cusboonaysiintaan loo sii dayn doono aaladda. Laakiin mar hore ayay bilaabatay.
Sababtoo ah dadka isticmaala Taiwan waxay bilaabayaan inay cusboonaysiiyaan Android Pie oo ku yaal Asus ZenFone 5Z. Qaabkan, oo ka mid ah calanka astaanta, kaas oo lagu iibiyey dhowr bilood Yurub, uu helo kahor dhammaadka sannadka.
Summadu ma aysan dooneynin inay sugto si ay u soo saarto casriyeynta isticmaaleyaasha dhexdooda. Markaa ka hor dhammaadka sannadka, durba waa la bilaabay cusboonaysii Asus ZenFone 5Z si rasmi ah ugu socota Android Pie. In kastoo, xilligan la joogo aysan jirin taariikho ballaarinta cusboonaysiinta adduunka oo dhan. Waxay qaadan kartaa dhowr toddobaad in la dhammaystiro.
Iyada oo ay weheliso cusboonaysiinta Android Pie, taleefanku wuxuu helayaa balastarka amniga bisha November. Kani ma aha balastarkii ugu dambeeyay, wax la yaab leh, oo aan sharraxaad laga bixin. Miisaanka cusboonaysiinta waa 1 GB. Sidaa darteed waxaa muhiim ah in boos loo helo.
Markaa dhawr maalmood gudahood, Asus wuxuu siidaayay cusboonaysiinta laba ka mid ah taleefannadeeda. Hadda noqoshada ZenFone 5Z. Warka wanaagsan ee adeegsadayaasha leh qaabkan, oo astaanta si rasmi ah loogu soo bandhigay MWC 2018 ee Barcelona. Mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan buug -yarahooda.
Waxaan si taxaddar leh u eegi doonnaa sii -deynta cusboonaysiintaan ee Asus ZenFone 5Z adduunka oo dhan. Sababtoo ah haddii Taiwan ay durba heleyso casriyeyn noocan oo kale ah, waa inaysan waqti dheer ku qaadan inay ku faafto dalal kale. Haddaba waxaan rajaynaynaa inaan helno faahfaahin dhab ah dhawaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Asus ZenFone 5Z wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android Pie